Fitsangatsanganana ao Brunei: Vonona hitora-bato azy ho faty? Ahoana ny fandraisan'ny WTTC sy ny UNWTO?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana ao Brunei: Vonona hitora-bato azy ho faty? Ahoana ny fandraisan'ny WTTC sy ny UNWTO?
Nanjary toerana mahafaty i Brunei mba hitsidika azy manomboka ny 3 aprily, indrindra raha mpikambana ao amin'ny Community LGBT ianao.
Amin'ny herinandro ambony dia hanana ny fihaonambenany isan-taona any Seville, Espana ny World Travel and Tourism Council (WTTC). Hihaona sy hihaino ny lahatenin'ny filoha amerikana Obama ny mpitondra fizahantany manerantany. Moa ve ny filoha Obama, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, na ny CEO WTTC, Gloria Guevara, hilaza zavatra momba ny zava-mitranga any Brunei?
Tsy mbola misy firenena eto amin'izao tontolo izao hatreto izay nampitandrina ny momba an'i Brunei. Ny manam-pahefana amerikana dia manana mpanolotsaina fitsangatsanganana 2 manohitra an'i Alemana na Bahama fa mahita fitsangatsanganana tanteraka ho an'ny Amerikanina rehefa misy lalàna vaovao mandrahona ny olom-pirenena sy ny mpitsidika, ao anatin'izany ny zaza iharan'ny famonoana noho ny fitoraham-bato noho ny fanaovana firaisana ara-nofo eo amin'ny samy lahy na samy vavy sy ny fanapahana ny fandrobana. Hanan-kery tahaka izany ny lalàna any Brunei Darussalam amin'ny 3 aprily.
Firenena bitika ao amin'ny nosy Borneo i Brunei, ao amin'ny faritra roa miavaka manodidina an'i Malezia sy ny Ranomasina China Atsimo. Fantatra amin'ny moron-dranomasina sy ny ala tropikaly biodiverse, ny ankamaroany dia voaaro ao anaty tahiry. Ny renivohitra, Bandar Seri Begawan, dia trano onenan'i Jame'Asr Hassanil Bolkiah moske manana ny maha-izy azy sy ireo domes volamena 2 misy azy. Ny lapan'ny Istana Nurul Iman lehibe ao an-drenivohitra no fonenan'ny sultan manjaka ao Brunei
"Ny fehezan-dalàna miandry amin'ny fehezan-dalàna famaizana ao Brunei dia ahafahana mitora-bato sy manapaka ny sazy fanasaziana - ao anatin'izany ny ankizy, tsy manonona afa-tsy ny lafiny ratsy indrindra aminy", hoy i Rachel Chhoa-Howard, mpikaroka any Brunei ao amin'ny Amnesty International.
“Tsy maintsy miato avy hatrany i Brunei amin'ny tetikasany hampiharana ireo sazy mahery vaika ireo ary hamerina hanitsy ny lalàna mifehy ny sazy mifanaraka amin'ny adidiny momba ny zon'olombelona. Ny vondrona iraisam-pirenena dia tsy maintsy manameloka haingana ny hetsik'i Brunei hametraka ireo sazy henjana ireo. ”
Ireo sazy ireo dia omena ao amin'ireo faritra vao ampiharina amin'ny fehezan-dalàna famaizana Syriana Brunei Darussalam izay hanan-kery amin'ny 3 aprily 2019, Mariho ao amin'ny tranokalan'ny mpisolovava.
“Mampihoron-koditra azy ny fampijaliana ara-dalàna sy sazy tsy mendrika toy izany. Ny sasany amin'ireo 'fandikan-dalàna' mety tsy tokony horaisina ho heloka bevava mihitsy, ao anatin'izany ny firaisana ara-nofo eo amin'ny samy lahy na samy vavy, ”hoy i Rachel Chhoa-Howard. “Nahazo fanamelohana be dia be ireo fepetra fanararaotana ireo, raha vao niresaka momba ny drafitra dimy taona lasa izay.”
Ny amnistia dia naneho ahiahy lehibe momba ny fehezan-dalàna famaizana rehefa nampiharina tamin'ny aprily 2014 ny dingana voalohany amin'ny kaody.
“Ny fehezan-dalàna momba ny sazy an'i Brunei dia lalàna iray tsy misy kilema izay misy andininy isan-karazany manitsakitsaka ny zon'olombelona,” hoy i Rachel Chhoa-Howard. “Ary koa ny famaizana sazy henjana, tsy maha-olombelona ary manambany, dia mametra miharihary ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra, fivavahana, ary finoana, ary manamarika ny fanavakavahana ny vehivavy sy ny zazavavy.”
Ny fitoraham-bato sy ny fihazana hamonoana ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBT dia tsy olana mitoka-monina ao Brunei fotsiny. Manatevin-daharana ireo firenena toa an'i Irak, Iran, Saudi Arabia na Tanzania i Brunei.
Brunei Darussalam dia nanao sonia nefa tsy mbola nanamarina ny Fifanarahana manohitra ny fampijaliana sy ny fampijaliana na fanasaziana, fanararaotana na fanasaziana, ary nandà ny tolo-kevitra rehetra momba izany teo amin'ny fandinihana ny zon'olombelona tao amin'ny ONU tamin'ny 2014.
Araka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, ​​ny sazy amin'ny kaporaly amin'ny endriny rehetra, toy ny fitora-bato, manapaka na mikapoka, dia fampijaliana na sazy mahery setra, tsy mahaolona na manambany, izay voarara amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny asan'ny fampijaliana sy ny fampijaliana hafa dia voarakitra an-tsoratra ao amin'ireo fitaovana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, ​​izay ny ankamaroany dia tsy nanao sonia na nankatoavina i Brunei. Ankoatr'izay, ity fandraràna ity dia ekena ihany koa ho fitsipiky ny lalàna iraisam-pirenena mahazatra, midika izany fa voafatotry ny fanjakana rehetra izy ireo na dia tsy antoko iray amin'ny fifanarahana fifanarahana mifandraika amin'ny zon'olombelona aza. Ny asa fampijaliana rehetra dia miteraka heloka eo ambanin'ny lalàna iraisam-pirenena.
Raha mitazona ny fanamelohana ho faty amin'ny lalàna i Brunei, dia fanafoanana izany amin'ny fampiharana. Sazy vaovao iray no napetraka tamin'ny taona 2017, noho ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny zava-mahadomelina.
Taona vitsy lasa izay ny Sultan of Brunei dia nilaza tamin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO sy ny CEO an'ny WTTC: "Hanao izay fara herinay izahay hanohanana ny fizahantany. Zava-dehibe stratejika ho an'i Brunei ny fizahantany ary mifototra amin'ny loharanom-pahalalana lehibe roa: ny ala mando madio eto amin'ny firenena afovoan'i Borneo, sy ny lova ara-panahy sy ara-kolontsaina. Ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy maintsy miankina amin'ny fivoaran'ny fizahan-tany, hoy ny Sultan nanamafy.
Millennium Airport Hotel Dubai dia mandray anjara amin'ny Can Collection Day
Mampiroborobo ny dia amin'ny “Xander Way” ny fizahantany Aruba momba ny fizahan-tany sy ny baseball Major Leaguer